Bit By Bit - Ethics - 6.4.1 Nkwanye Ùgwù maka Persons
Nzuzo &amp; Nkwenye
1 Okwu Mmalite
1.1 An ink ihichapụ
1.2 Welcome to dijitalụ afọ
1.3 Research imewe
1.4 Gburugburu nke akwụkwọ a
1.5 Ndepụta akwụkwọ a
Ihe ị gụrụ na-esote
2 Idebe ihe omume
2.1 Okwu Mmalite
2.2 Big data
2.3 Eji mara nke nnukwu data
2.3.2 Na-aga n'ihu
2.3.3 Nke na-adịghị emetụta
2.3.4 ezughị ezu
2.3.5 Enweghị ike
2.3.6 anaghị akọwa akwụkwọ
2.3.8 Algorithmically confounded
2.4 Research azum
2.4.1 agụta ihe
2.4.2 ịkọ na nowcasting
2.4.3 Approximating nwere
Akwụkwọ mgbakọ na mwepụ
3 Ịjụ ajụjụ
3.1 Okwu Mmalite
3.2 Ịjụ ajụjụ na nyocha
3.3 Mkpokọta nnyocha e mere njehie kpuchie
3.4 Ònye ịjụ
3.5 New ụzọ nke ịjụ ajụjụ
3.5.1 ebe obibi nwa oge nnwale
3.5.2 Wiki, nnyocha
3.6 Nchọpụta e jikọtara na nnukwu data data
3.6.1 arịọsi ike
3.6.2 arịọ ka ọ dị mma
4 agba nwere
4.1 Okwu Mmalite
4.2 Gịnị bụ nwere?
4.3 abụọ akụkụ nke nnwale: lab-ubi na analọg-digital
4.4 N'ịga n'ofè mfe nwere
4.4.2 Heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta
4.5 Ime ka o mee
4.5.1 Jiri ebe gburugburu
4.5.2 Mee nyocha nke onwe gị
4.5.3 Mee ngwaahịa gị
4.5.4 Onye mmekọ na ndị dị ike
4.6.1 Mepụta efu variable eri data
4.6.2 Mee ụkpụrụ omume n'ime imewe gị: dochie, dozie, na belata
5 Ịmepụta mmekọrịta ọnụ
5.1 Okwu Mmalite
5.2 Human mgbakọ
5.2.1 Galaxy Zoo
5.2.2 Otuowo-nzuzo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị manifestos
5.3 Open oku
5.3.1 Netflix Nrite
5.3.3 ọgbọ na-Patent
5.4 ekesa data collection
5.5 emebe gị onwe gị
5.5.1 ịkpali sonyere
5.5.2 leverage heterogeneity
5.5.3 Focus ntị
5.5.4 Kwado na anya
5.5.5 Nwee usoro ziri ezi
5.5.6 Final imewe ndụmọdụ
6.1 Okwu Mmalite
6.2 atụ atọ
6.2.1 mmetụta uche Contagion
6.2.2 Nri, Oge, na Oge
6.3 Digital bụ dị iche iche
6.4 anọ ụkpụrụ
6.4.1 Nkwanye Ùgwù maka Persons
6.4.4 Nkwanye Ùgwù maka Iwu na Public Interest
6.5 abụọ usoro ziri ezi frameworks
6.6 Areas isi ike
6.6.1 ụbụrụ bụ
6.6.2 Understanding na hapụụrụ informational ize ndụ
6.6.4 na-eme mkpebi na ihu nke ejighị ihe n'aka
6.7 Uru Atụmatụ
6.7.1 The IRB bụ a n'ala, ọ bụghị a n'uko
6.7.2 Tinye onwe gị na onye ọ bụla akpụkpọ ụkwụ
6.7.3 Chee echiche nke nnyocha ụkpụrụ ọma dị ka na-aga n'ihu, ọ bụghị pụrụ iche
Historical odide ntụkwasị
7 The n'ọdịnihu
7.1 Na-atụ anya
7.2 Isiokwu nke ọdịnihu
7.2.1 Ngwakọta nke njikeremades na omenala
7.2.2 soò na-eche nanị data collection
7.2.3 Ethics na research imewe
7.3 Back to mmalite
Nke a translation e kere site na kọmputa. ×
Akwanyere Persons bụ ihe banyere ịgwọ ndị mmadụ dị ka kwurula na ịsọpụrụ ha chọrọ.
The Belmont Report na-ekwu na ụkpụrụ nkwanye ùgwù maka ndị mmadụ nwere akụkụ abụọ dị iche iche: (1) ndị mmadụ n'otu n'otu ga-emeso dị ka ndị kwụrụ ọtọ na (2) ndị nwere okpukpu ala ka enwere ike inweta nchedo ọzọ. Ido onwe ya na-eme ka ndị mmadụ chịkwaa ndụ ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nkwanye ùgwù maka ndị mmadụ na-atụ aro na ndị na-eme nchọpụta ekwesịghị ime ihe nye ndị na-enweghị nkwenye ha. N'ụzọ doro anya, nke a na-agbanyeghị ma ọ bụrụ na onye nyocha ahụ eche na ihe ahụ na-eme bụ ihe na-adịghị njọ, ma ọ bụ ọbụna bara uru. Ịkwanyere Ndị mmadụ ùgwù na-eduga n'echiche ahụ bụ na ndị na-eme nchọpụta-ọ bụghị ndị na-eme nchọpụta-ga-eme mkpebi.
Na omume, ụkpụrụ nke nkwanye ùgwù maka mmadụ ka akọwapụtara pụtara na ndị nchọpụta kwesịrị, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, nweta nkwenye sitere n'aka ndị so na ya. Echiche bụ isi na nkwenye ezinyere bụ na ndị na-etolite kwesịrị ịkọwa ozi dị mkpa na ngwugwu nghọta na mgbe ahụ, ha ga-ekwenye ekwenye na-esonye. Nke ọ bụla n'ime okwu ndị a bụ isiokwu nke nnukwu arụmụka na nkuzi (Manson and O'Neill 2007) , m ga-enyekwa mpaghara 6.6.1 iji kwenye nkwenye.
Itinye ụkpụrụ nke Ịkwanyere Ndị mmadụ ùgwù na ihe atụ atọ site na nmalite nke isi na-eme ka ebe ndị nwere nchegbu na onye ọ bụla n'ime ha pụta ìhè. N'okwu nke ọ bụla, ndị nchọpụta mere ihe maka ndị na-eso ha - jiri data ha (Tastes, Ties, or Time), jiri kọmputa ha rụọ ọrụ ntụgharị (Encore), ma ọ bụ debanye aha ha n'ime nnwale (Emotional Contagion) -nweghị nkwenye ma ọ bụ mmata ha . Imebi iwu nke Ịkwanyere Ndị mmadụ ùgwù adịghị eme ka ọmụmụ ihe ndị a bụrụ nke na-adịghị ekwe omume; Ịkwanyere mmadụ ùgwù bụ otu n'ime ụkpụrụ anọ. Ma iche echiche banyere nkwanye ùgwù maka ndị mmadụ na-atụ aro ụfọdụ ụzọ a pụrụ isi meziwanye ọmụmụ ihe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme nchọpụta nwere ike inweta ụdị nkwenye site na ndị na-eme nchọpụta tupu ọmụmụ ahụ amalite ma ọ bụ mgbe ọ kwụsịrị; M ga-alaghachi na nhọrọ ndị a mgbe m na-atụle ikikere nkwupụta na ngalaba 6.6.1.